Matetika mahatsapa ho toy ny mandeha any ampita kanefa tsy miala ao an-tranony i Marie Kéïta · Global Voices teny Malagasy
Matetika mahatsapa ho toy ny mandeha any ampita kanefa tsy miala ao an-tranony i Marie Kéïta
"Toy ny rivotra madio ny mamaky sy mianatra zava-baovao."
Voadika ny 02 Marsa 2021 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Italiano, Ελληνικά, English
Sary natolotr'i Marie Kéïta, nahazoana alàlana.
Fanamarihana avy amin'ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina: Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra vaovao antsoina hoe GVer of the Week izay hanasongadinanay mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa notendren'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy isaky ny Alarobia. Fenoy ity takelaka ity raha maniry hanendry olona hatolotra eto ianao.
Efa lahatsoratra maherin'ny 30 no nadikan'i Marie Kéïta tao anatin'ny roa taona naha mpikambana azy tato amin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay. Avy any Côte d'Ivoire izy, ary monina any Paris, Frantsa ankehitriny. Nizara ny nahatonga izao tontolo izao ho lasa toerana kely kokoa noho ny fandraisany anjara tato amin'ny GV izy tato anatin'ity resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny imailaka ity.
Global Voices: Inona no ataonao any ivelan'ny GV ? Inona no zavatra hafa mahaliana anao ?
Marie Kéïta (MK): Mandany ny fotoanako betsaka amin'ny fandikan-teny aho amin'ny maha mpandika teny mahaleotena ahy, haha! Mazoto mamaky boky aho, alohan'ny hamakiako ireo boky maro be izay efa ananako dia manamelo-tena aho amin'ny fividianako boky be dia be! Nandany ny fotoanako niaraka tamin'ny namako aho talohan'ny namelezan'ny valan'aretina anay ary nanao dia lavitra matetika araka izay tratra. Tiako ihany koa ny mihaino rakipeo hahitako tantara sy hevitra samihafa avy amiko izay manitikitika ny saiko.
GV: Inona ny zavatra manaitra ny olona aminao ?
MK: Vehivavy mirehareha aho, manana fahalianana lalina amin'ny zon'ny vehivavy ary afaka miresaka momba izany mandritra ny ora maro. Manamarina izany ny pejin'ny mpanoratra GV amin'ny anarako! Toa tsapako fa matahotra ny olona indraindray milaza am-pahibemaso fa [feminista] izy ireo, noho ny tahotra ny ho tsaraina. Mino aho fa tokony hankahery ny olon-drehetra isika hatoky tena bebe kokoa amin'ny feminisma.
GV: Inona no tianao ho fantatry ny olona momba ny toerana onenanao ?
MK: Paris is very different from what we see in movies or series. It's more diverse. The image that some people have of Parisians in general and women, in particular, couldn't be more different from my reality. And no, not everyone in Paris walks around with a beret! 🙂
MK: Tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika amin'ny sarimihetsika na andian-tantara i Paris. Misy fahasamihafana kokoa. Tsy misy hafa amin'ny zava-misy amiko ny fiheveran'ny olona sasany momba ny Pariziana amin'ny ankapobeny sy ny vehivavy, indrindra indrindra. Ary tsia, tsy ny olona rehetra ao Paris no mandehandeha manao satroka beret! 🙂
GV: Ahoana no nahitanao ny GV sy ny nanombohanao nandray anjara ?
MK: Niady mafy nitady asa aho taorian'ny nahazoako diplaoma tamin'ny oniversite ary tsy nijanona nandika teny. Nisy namako iray nilaza tamiko momba ny GV ary nilaza fa raisina an-tanan-droa ny mpilatsaka an-tsitrapo. Dodona ny handray anjara aho rehefa avy namaky lahatsoratra vitsivitsy!
Fomba iray nahafahako nizatra io sady nandika teny ireo tantara manan-danja izay tsy novakiako tany an-kafa. Nekena tamim-pankasitrahana ny fangatahako ary tantara ny ambiny, hoy izy ireo! Tiako ny ho anisan'ny vondrom-piarahamonina lehibe toy izany.
GV: Nahoana no zava-dehibe ny GV araka ny eritreritrao ?
MK: Zava-dehibe ny GV noho ny fahasamihafan'ireo tantara taterintsika. Mahatalanjona! Rariny ny milaza fa sarotra ny nitatitra vaovao tato ho ato. Toy ny rivotra madio ny mamaky sy mahalala zava-baovao. Manantena aho fa tsy hahita cliché (ilay sary fahita) fa ny fandikan-teny sy ny famakiana tantara avy amin'ny faritra manerantany izay tsy hita tatitra matetika amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra dia toy ny mandeha mitety izao tontolo izao kanefa tsy miala ao an-tranoko.
Misy ihany koa ny fahatsapana matanjaka ilay vondrom-piarahamonina! Mbola tsy nisy ny fotoana nihaonako tamin'ireo GVers mivantana saingy efa nahazo namana aho. Tena mifanampy tokoa izahay. Toerana azo antoka, tsy mitsara ary lasa tsy fahita firy izany amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy.
GV: Inona no antony handraisanao anjara ato amin'ny GV ?
MK: Mety ho sehatra sarotra iasana ny fandikan-teny. Mazava ho azy fa tsy maintsy mieritreritra mitady fivelomana aho, saingy tsy te hiala amin'ny zavatra tiako aho. Noho ny GV, afaka mianatra momba izany sy miasa amin'ireo lohahevitra manan-danja amiko aho.
GV: Ahoana no nanovan'ny GV ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ?
MK: Nasehon'ny GV tamiko fa mifandray daholo isika. Mbola somary efa fandre mahazatra indray izany kanefa marina. Tsy sakana ny miaina any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
7 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy